Tag: discount builders supply | Martech Zone
Tag: famatsiana mpanamboatra fihenam-bidy
Mpivarotra fiheverana: Mahazo tsikera bebe kokoa noho ny trano fisakafoanana ao amin'ny Yelp ny antsinjarany
Talata, Janoary 31, 2017 Sabotsy, Oktobra 20, 2018 Miriam Ellis
Henonao ny TripAdvisor, mieritreritra hotely ianao. Maheno Healthgrades ianao, mieritreritra dokotera. Henonao ny Yelp, ary mety tsara ny eritreretinao fa fisakafoanana. Izany indrindra no nahagaga ny tompon'orinasa sy mpivarotra eo an-toerana hamaky ny statistikan'i Yelp manokana izay milaza fa, tamin'ny 115 tapitrisa ny mpanjifa resahina dia nijanona ny mpampiasa hatramin'ny 22%, mifandraika amin'ny fiantsenana sy 18% mifandraika amin'ny trano fisakafoanana. Ny lazan'ny mpivarotra, avy eo, no mandrafitra ny ampahany lehibe indrindra amin'ny